USAFUNA ukufunda okuningi kwezamabhizinisi uNksz Zanele Ndebele oklonyeliswe ngendondo yeTop Achiever ohlelweni lokuqeqesha abasafufusa kulo mkhakha ISITHOMBE: SITHUNYELWE
ZANELE MTHETHWA | May 30, 2019
UKUBA yivolontiya esikoleni kuvulele ithuba usomabhizinisi osafufusa ukuwina emncintiswaneni wokuqeqeshwa. UNksz Zanele Ndelebe (27) uklonyeliswe ngendondo yeTop Achiever kwiYouth Entrepreneurship Programme (Yep) nonyaka.
Uqwaqwade emakhanda abayisishiyagalolunye eGauteng, abebeyingxenye yalolu hlelo lokuqeqeshwa olwaqalwa yiVodacom ne-Innovator Trust. Wathuka ngesikhathi kubizwa igama lakhe emcimbini wokuthweswa iziqu, etshelwa ukuthi ube yiTop Achiever kulolu hlelo.
UNksz Ndebele utshele Isolezwe ukuthi wayevele enza izifundo ze-Information Technology (IT) ngaphansi kweVodacom Academy, waziphothula ngo-2017.
“Emuva kokuqeda izifundo zami ngaya ezikoleni ezahlukene eSoweto, ngivolontiya emsebenzini. Kuthe ngisephakathi ngathola umbiko wokuthi sengikhethwe ukuba ngaphansi kohlelo iYep,” echaza.
Mayelana ngokuphasa ngamalengiso kulolu hlelo, uthe usizwe ukuzimisela, engaphuthwa imihlangano. Uthe ukuba kulolu hlelo kumfundise ukuthi kubalulekile ukuzihlelela isikhathi nokuqinisekisa ukuthi amakhasimende ajabulile uma usebhizinisini. UNksz Ndebele osazimisele ukuthola olunye ulwazi kwezamabhizinisi, uhlela ukungena kwelokuhlela imicimbi.
“Ngiyayithanda injabulo ehambisana nemigubho okubalwa imishado, amaBridal shower nokunye. Kuyangijabulisa ukuba sebhizinisini lapho uzokwazi ukubona bukhoma ikhasimende lijabulela umsebenzi wakho. Ngiyathanda ukuthi ibhizinisi engizolenza kube elomndeni ukuze sisizane, sifukulane,” kusho yena.
UNksz Ndebele ubengomunye wabebehlela umcimbi wokuthweswa iziqu zeYep, athe yikona okufake kakhulu uthando lokwenza ibhizinisi kulo mkhakha.
Uthe usafuna ukuqhubeka afunde emkhakheni we-IT kodwa okwamanje usabhalisele ukwenza iTourism eCentral Johannesburg College okuyizifundo azishiya phakathi phambilini. Lokhu kwenziwa ukuthi athole umfundaze emkhakheni weBeauty Therapy unyaka owodwa. Emuva kwalokho wenza izifundo zekhompyutha nezeCall Centre e-Orlando.
UNksz Ndebele unguthunjana ezinganeni zamantombazane ezine, waphothula * -matric eSelelekela Secondary ngo-2012. Uthi ukhonze ukukhithiza, ukulalela umculo, ukufunda nokudansa. Uzichaza njengomuntu onomfutho futhi othanda ukuzama kuyo yonke imikhakha kwezemfundo nasebhizinisini.
Umyalezo wakhe kwabanye ontanga ukuthi bangazithambisi uma befuna ukuphumelela empilweni.
“Sonke sineziphiwo ezingafani okumele sizisebenzise ndawonye ukusizana. Ngeke ukwazi ukuphumelela ngekhono lakho wedwa, yingakho kusiza ukuhlanganyela nabanye. Ukuba kulolu hlelo lweYep kungifundise ukuthi kubalulekile ukubekezela nokuxhumana kahle namakhasimende uma ungusomabhizinisi,” kusho uNksz Ndebele.